Sida loo dhoofiyo Faylal ay kaabta ka iPhone 5 / 4s in Computer
> Resource > iPhone > Sida loo dhoofiyo Faylal ay kaabta ka iPhone 6 Plus / 6 / 5C / 5S / 5 / 4s
Shawladda kaabta: Waraaqda ceshan iPhone Data
Waa maxay kaabta File iPhone?
Sida aynu wada ognahay, mar walba oo aad u hagaagsan qalab iPhone aad la Lugood, aad dib kartaa files iPhone aad computer by Lugood. Dhibaatada waxa ay tahay, faylka gurmad waa file SQlitedb ah, oo aan la akhriyi karin ama heli on your computer si fudud. Taas macnaheedu waxa weeye, ma waxaad ka heli kartaa content dhab ah ka bixin xataa haddii aad ka heli kartaa file gurmad this.
Waa maxay sababta ah ee kaabta shawladda iPhone loo baahan yahay?
Laakiin marar badan waxaan rabnaa in aan soo saaro iPhone 6S Plus, iPhone 6S, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 5 ama iPhone 4s gurmad files si computer, iyo sidoo kale akhri oo waxaan iyaga ku badbaadin kombiyuutarka si looga fogaado in iyaga laga badiyay . An kaabta shawladda iPhone waa lagama maarmaan in xaalad noocaas ah.
Sababta kale ee aan u baahanahay ah iPhone gurmad shawladda waa in Lugood Wararka faylka gurmad mar walba oo aad u hagaagsan u leh, ma files cusub gurmad loo abuuray, oo taas oo ka dhigaysa in aysan suuragal aheyn inuu ka soo kabsado aad u weyn files gurmad.
An iPhone gurmad shawladda kaa caawin doona inaad wax akhriska iyo xog gurmad helaan iPhone straightly kombiyuutarka.
3 Talaabada Macdan iPhone ee kaabta faylasha waxay ka iPhone 6S Plus / 6S / 6 Plus / 6 / 5C / 5S / 5 / 4s
1. Soo qaado ah iPhone gurmad shawladda hore
Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Mac iPhone Data Recovery) ama Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery) (Windows) waa in aad doorashada ugu fiican ee (macruufka 9 taageeray) .Tani waxa qalab u yeela ma aha oo kaliya in aad iPhone gurmad files laakiin sidoo kale iyaga soo kabanayso, waxaad dooran kartaa in Falanqeynta in faahfaahinayaa iyo sidoo kale iyaga ku badbaadin on your computer.
Download oo ku xidh on your computer, waxaa jira laba nooc oo la kala dooranayo (Windows / Mac). Maxkamad version Free kuu ogolaanaya in aad soo saaro oo ku eegaan oo dhan ka kooban si faahfaahsan.
2. Isku aad iPhone in computer oo ay maamulaan barnaamijka. Dooro magacaaga qalab iPhone oo guji "Start Scan"
Fiiro gaar ah: ha u hagaagsan aad iPhone la computer marka la isticmaalayo qalab, haddii kale file gurmad aad rabto in aad soo saaro la overwritten laga yaabaa.
3. Dhoofinta ee kaabta faylasha in Computer ah
Marka iskaanka ay ka badan tahay, faylasha gurmad la tusay doonaa sida hoos ku qoran: ee photos, videos, jadwalka taariikhda, xiriirada, SMS, qoraalada iyo wac taariikhda. Waxaad awoodi doontaa in ay iyaga ku eegaan mid mid. Dooro kuwa faylasha aad rabto in aad soo saaro ka dibna riix "Ladnaansho" si ay u soo saaro on your computer. Taasi oo dhan oo fudud oo ku filan.
Si looga fogaado ka iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 5 ama iPhone 4s badiyay xogta, waxaan si xoog kuu soo jeedinaynaa inaad Macdan aad iPhone gurmad files on your computer waqti kasta ka dib markii aad u hagaagsan qalab aad la Lugood.